Ita yako yekusimwa chikwereti kubva kune zvaunofunga kuti zvakakosha. Sarudza uwandu hwekutsvaga mari yako maererano nemitemo yako: kukura muhuwandu hwezvikamu, kutengeswa kwemari yekambani yemakambani, mutengo wekugoverwa kwegore negore, nhepfenyuro yemari pamitero, nezvimwewo.
Stock price rose:
Deredzai kusarudzwa kwekambani dzinoshandiswa nemiganhu pamusoro penguva yakasarudzwa.
Zvikamu zvakabhadharwa: *
Kugoverwa - mubhadharo, wakatarwa kubva kune purogiramu yekambani uye yakabhadharwa nesarudzo yemusangano wevatsvairi vemakambani. Zvikamu zvinowanzomiririra kubhadhara mari, asi zvinogonawo kubudiswa nenzira yezvikamu kana imwe nzvimbo.
Nyika kana Stock Exchange:
Deredzai mienzaniso yekambani kune imwe nzvimbo kana nzvimbo yekutengesa uko inogoverwa nekambani.
kubvira vhiki yapfuura
kubvira mwedzi wapera
mumwedzi 3 yapfuura
kubvira gore rapera
pamusoro pemakore matatu akapfuura
mwedzi mitanhatu ipi neipi
kazhinji kanomwe pagore
Kubva kumativi ose enyika Ajendina Ayarendi Bharugeriya Bherujiyamu Bhuraziri Chamhembe Afrika Chammhembe Koria China Chire Czech Republic Dhenimaki Esitoniya Europe Finirendi Firipaini Furanzi Girisi Hangari Hong Kong India Indonezhiya Itari Izirayeri Japani Jerimani Kanadha Kiroshiya Korombiya Marazhiya Masedhoniya Mekisiko Moroko Mubatanidzwa wenyika dzeArab Emi Netharenzi Noweyi Nyika dzakabatana Nyika dzakabatana Nyuzirendi Ositireriya Ositiriya Pakisitani Porendi Putugaro Rashiya Rativhiya Rituaniya Rukuzemubhogu Saipurasi Shiri Ranga Singapowo Sirovhinyiya Siwidheni Siwizarendi Speini Tairendi Taiwan Teki Vhenezwera Vhetinamu AMS (Amsterdam Exchange) ASE (NYSE Market (Amex)) ASX (Australian Stock Exchange) ATH (Athene Stock Exchange) BCN (Barcelona Stock Exchange) BDP (Budapest Stock Exchange) BER (Berlin Stock Exchange) BKK (Thailand Stock Exchange) BMF (Brazil Mercantile & Futures Exchange) BRN (Berne eXchange) BRU (Euronext Brussels) BSE (Bombay Stock Exchange) BTS (BATS Global Markets) BUE (Buenos Aires Stock Exchange) BUL (Bulgarian Stock Exchange) BVC (Columbia Stock Exchange (Bolsa de Valores de Columbia)) CBT (Chicago Board of Trade) CCS (Caracas Stock Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CNQ (CNQ) COL (Colombo Stock Exchange) CPH (Copenhagen Stock Exchange) CSC (Ice Futures US) CSE (Canadian Stock Exchange) CYP (Cyprus Stock Exchange) DME (Dubai Mercantile Exchange) DUB (Irish Stock Exchange) DUS (Dusseldorf Stock Exchange) ENX (Euronext Derivatives) EUX (Eurex) FRA (Frankfurt Stock Exchange) FUK (Fukuoka Stock Exchange) GER (XETRA Stock Exchange) HAM (Hamburg) HAN (Hanover) HEL (Helsinki Stock Exchange) HKF (Hong Kong Futures Exchange) HKG (Hong Kong Stock Exchange) HSX (HoChiMinh Stock Exchange) ICE (Ice Futures Europe) IOB (International Order Book) ISE (ChiIrish) IST (Istanbul Stock Exchange) JKT (Jakarta Stock Exchange) JSD (JASDAQ Securities Exchange) JSE (Johannesburg Stock Exchange) KDQ (KOSDAQ) KFE (Korean Futures Exchange (KOFEX)) KLS (Malaysia Exchange) KOE (KOSDAQ) KSA (Karachi) KSC (Korea Stock Exchange) LBC (Casablanca Stock Exchange (Casablanca Stock Exchange)) LIS (Euronext Lisbon) LJE (Ljubljana Stock Exchange) LSE (London Stock Exchange) LUX (Luxembourg Stock Exchange) MAC (Macedonian Stock Exchange) MCE (Madrid Stock Exchange (Makate)) MCX (Moscow Exchange (MOEX)) MDE (Malaysia Derivatives Exchange) MEX (Mexico Stock Exchange) MFM (Mercado Espanol de Futuros Financieros (MEFF)) MIL (Milan Stock Exchange / Borsa Italia) MSE (Montreal Stock Exchange (Bourse de Montreal)) MUN (Munich) NAG (Nagoya Stock Exchange) NAS (NASDAQ) NCM (NASDAQ) NGM (NASDAQ) NJM (Hercules Stock Exchange) NMS (NASDAQ) NSE (National Stock Exchange of India) NYM (New York Mercantile Exchange (NYMEX)) NYQ (NYSE) NYS (NYSE) NZE (New Zealand Stock Exchange) OBB (OTC Bulletin Board Market) OMX (Mumwe Chicago) OPR (OPRA) OSE (Osaka Securities Exchange) OSL (Oslo Bors) PAR (Euronext Paris) PCX (NYSE Arca) PHS (Philippine Stock Exchange) PNK (Pink Sheets) PRG (Prague Stock Exchange) RSE (OMX Baltic) SAF (South African Futures Exchange) SAO (BOVESPA - Sao Paolo Stock Exchange) SES (Singapore Exchange) SET (Stock Exchange yeThailand) SFE (Australian Stock Exchange Futures) SGO (Santiago Stock Exchange) SGX (Singapore Exchange Derivatives Clearing Ltd.) SHA (Shanghai Stock Exchange) SHE (Shenzhen Stock Exchange) SHH (Shanghai Stock Exchange) SHZ (Shenzhen) STO (Stockholm Stock Exchange) STU (Stuttgart Stock Exchange) TAI (Taiwan Stock Exchange) TAL (OMX Baltic Exchange - Talinn) TLV (Tel Aviv Stock Exchange) TOR (Toronto Stock Exchange) TSE (Tokyo Stock Exchange) TWO (Taiwan OTC Exchange ) VAN (Toronto Venture Exchange) VIE (Vienna Stock Exchange) VSE (OMX Baltic Exchange - Vilnius) VTX (SIX Swiss Exchange) WAR (Warsaw Stock Exchange) ZSE (Zagreb Stock Exchange)
Zvimwe zvingasarudzwa: *
Nhaka yakanaka yemari ndeyekuunza makambani anobatsira maererano nemashoko ekupedzisira ekuwana mari. Pasina zvikwereti - kuunza makambani asina mari kune mabhangi kana hurumende. Zvose zvinowanikwa muUrasi yeUnited States - zvikamu zvemakambani zvinoshandiswa mune mari dzakasiyana-siyana, nokuda kwekugadzirisa kwekuenzanidza, hutsika hwose huchashandurwa ku US dollars.
Nhaka yakanaka yemari
Zvose zvinodiwa muDH
✔ 68166 zvikamu zvinosangana nemitemo
Mari yehutano: *
Dhiyabhorosi pane zvikamu uye zvinyorwa zvemari hazviwaniki kune makambani ose.
R & D mari
Chikamu chekubhadhara mari
Zvipo zvega pagoga
* Dhiyabhorosi pane zvikamu uye zvinyorwa zvemari hazviwaniki kune makambani ose.
Ratidza zvikamu TOP 200
Rating share of companies. Ndekupi kwatingaisa mari? - imwe yeanonyanya kukoshesa mabasa epamhepo zvesaiti allstockstoday.com
Iko kwekudyara ndiyo mubvunzo unonyanya kukosha kune vese vanoita mari. Zviripachena kuti zvakanyanya kubatsira kuisa mari mumatura emakambani ari kukura zvakaderera uye pasina njodzi mumutengo. Iko kukosha kwekudyara kunoonekiswawo nehuwandu uye huwandu hwezvakagoverwa kubhadhara.
Asi kunze kweizvi parameter zviri pachena, kune zvimwe zvakawanda zvemakambani emakambani anotengesa zvinogona kukanganisa mubvunzo: "Ndekupi kwekudyara mari?".
Mune basa redu rekuyera masitokisi emakambani pamari yekutengesa zvinhu zvepasi rose, isu tinofungisisa zvinotevera zvinongedzo zvemari zvemakambani:
Mutengo wedura wamuka
Kana zvikamu zvinopihwa
Makambani ane yakanaka net mari
Iyo nguva yekukwira kwemitengo yemakambani yekambani pane kutengesa kutengesa
Kuita kwemari yekambani - mari yakawanda
Kuita kwemari yekambani - yakazara zvinhu
Kuita kwemari - mari yakakwana
Mari yekugovera kubhadhara
Mari yekuwana pachikamu
Pamhepo sitendi chiyero nekubudirira kwemari yekudyara inokutendera kuti uturidze huwandu hwemakambani emasheya nema parameter aya.
Zvakare, iwe unogona kugadzira yako yega yega kambani imwe neimwe kubva muyero yedu kuti vatevedzere pamhepo kuti ingave inobatsira here kuisa mari mairi.
Ruzivo mumasevhisi "Rating share of companies. Ndekupi kwatingaisa mari?" inotorwa kubva kune akavimbika akavimbika uye akagadziridzwa munguva chaiyo.
Mutengo wemasheya wakwira here?
Mutengo wemasheya wakwira here? -munda wefururo webasa redu unobvumidza iwe kudzikamisa kusarudzwa kumakambani ane masheya ake akakura pamusoro penguva yakasarudzwa yenguva.
Ratidza kuti unofarira makambani ane masheya akakura, unogona kwenguva dzakasiyana dzenguva.
Saka Sefa yedu "Ine mutengo wemasheya wakawedzera" inobvumidza iwe kusarudza kambani iyo mutengo wekugovera wakawedzera mukati menguva: kubva vhiki rapfuura, kubva mwedzi wapfuura, mumwedzi mitatu yadarika, kubva gore rakapera, makore matatu apfuura.
Kana zvikamu zvinoripwa zvabhadharwa, iyi ndiyo imwe uye yakakosha nyaya kune wese mushambadzi.
Mabhindauko - mubairo unoverengwa kubva pamubatsiro wekambani uye unobhadharwa nesarudzo yemusangano weavo vanogoverana kambani. Migove inowanzo kubhadhara mari.
Sefa yedu inobvumidza kuti usarudze makambani anobhadhara kana asingabhadhara zvakagovaniswa.
Uye avo vanobhadhara vanogona kusarudza iyo nguva apo makambani anobhadhara migove.
Iyo yekugovera dhizaini dhizaini nemakambani epasi rese emakambani anotendera iwe kusarudza kambani nehuwandu hwekubhadhara: kamwe chete pagore, kamwe chete pamwedzi mitanhatu, kamwe chete patatu, kazhinji kane pagore.
Net Income Makambani
Makambani ane mari ine mari yakawanda ndeayo makambani anobudirira zvikuru pasi rose.
Iyo inogara yakajeka mambure emari yekambani iroto yemumwe maneja wepamusoro wekambani uye chero muchengeti.
Iyo firita yebasa redu inokutendera kuti usarudze kambani ine mhedzisiro ine mari kubva kumakambani ese epasi uye wovaona sevanonyorera mari.
Mari Yekutengesa Yekukwira Nguva
Iyo nguva yekukwira kwemitengo yemakambani pakambani yekutengesa ndiyo chiratidzo chikuru chekugadzikana kwekubudirira kwekambani. Kana kambani ichishanda zvakatsiga uye ichigara ichiratidza purofiti, ipapo migawo yayo iri kugara ichikura.
Iyo nguva yekukura yakasimba yemakambani purofiti inogona kunge yakasiyana. Iyo yakareba nguva ino yekupindirana, iyo yakakura kukosha kwekambani.
Kubata kwedu kunoita kuti zvikwanisike kuronga rondedzero yemakambani zvichienderana nenguva yekukwira kwemitengo: yemakore matatu apfuura, kubva gore rakapera, kwemwedzi mitatu yadarika, kubva mwedzi wapera, kubva svondo rapfuura.
Kuita kwemari, mari yekutambira
Kuita kwemakambani kambani, senge mari inowanikwa, ndiyo mari inowanikwa nekambani panguva yakatarwa yekushuma kubvisa zvese zvakaderedzwa uye mitero.
Chiratidzo chezvemari "Mari inowanikwa" inonyanya kukanganisa kubhadharwa kwemigove.
Mari inowanikwa nekambani zvakare inokanganisa kukura kwemangwana kwemutengo wekambani mumusika wekutengesa.
Zviratidzo zvemakambani emakambani, zviwanikwa zvese
Kuita kwemari kambani. Huwandu hwehuwandu hwezvinhu chiratidzo chinotaura kuti yakakura uye yakavimbika sei kambani.
Iko kuwanda kwezvinhu zvekambani iyi mari inopa kukosha kwechikamu.
Semutemo, kukosha kwese kwekugoverana kwekambani hakuzombowira pasi pehuwandu hwehuwandu hwezvinhu zvesangano pamitengo yekutengesa.
Kuita kwemari, mari yakakwana
Kuita kwemari. Mari yakakwana yekambani iyi huwandu hwemari inotambirwa muaccount yekambani yenguva yakasarudzwa yekushuma.
Mari yakakwana yekambani ndeye inonzwisisika chiratidzo chekuti chii chichave purofiti yekambani mune ino uye inotevera nguva yekubika.
Mukushandira kwedu kwepamhepo kwemakambani ekuenzanisa pamadharesheni, unogona kusarudza makambani neinoratidza "mari yakazara yekambani".
Capitalization yekambani ndiyo huwandu hwekukosha kwezviga zvese zvemushandirapamwe.
Iko capitalization yekambani ndiyo paramende inonyanya kutaura nezvehukuru hwekambani. Iwe unogona kugadzirisa makambani ne "kambani capitalization" paramende.
Sezvo mutemo, pamusika wepasi rese, capitalization zviratidzo zvemakambani epasi anoonekwa mumadhora.
Kugovera goho - mari inotambirwa kubva kuchikamu chega chega chemari inoisirwa mari pane chimwe chikamu, uye chakatemwa nehuwandu hwemari dzinobhadharwa pane ichi chikamu.
Iyo yekugovera goho, pamwe chete neshanduko mumutengo wechikamu cheiyo nguva yekubika, ndiyo mari inowanikwa nemugadziri anodyara muchikamu chekambani.
Asi chiratidzo chinonzi "dividend goho" kazhinji chinowanzogadzikana pane mutengo wechitoro. Zvekudyara kwenguva refu, ndizvozvo mutengo wekugovera ndiwo unonyanya kutungamira vatori vechikamu pamusika wekutengesa mari kukambani.
Dhaudzira payout yakawanda
Huwandu hwemari yekubhadhara chiratidzo chakazara chekambani yese uye kuona kuti imarii yakashandiswa mari kubhadhara zvikamu zvese zvekambani.
Iyo huwandu hwekubhadhara kwemabhadharo inonakidza mukubatana pamwe nemari yakazara yekambani uye mutengo wechikamu chimwe chete.
Mune sevhisi yedu yekuita sevhisi, unogona kusarudza nzira yekugadzirisa neiyo "Dhavhavha yekubhadhara huwandu" chiratidzo.
Mari yekuwana pamugove - chimwe chezviratidzo zvikuru zvemushambadzi mumusika wechitoro.
Mari inowanikwa pane chimwe chikamu - iyo yakazara purofiti yekambani, yakakamurwa nenhamba yezvikamu zvese zvekambani zvakanyorwa pamisangano yekutengesa.
Iwe unogona kugadzirisa rondedzero yemakambani aunoda ne "mapato pane chikamu" maitiro kuti uone makambani anobatsira zvikuru.